Goodax Barre: "Farmaajo waxaa arrintan lagu saari karaa maxkamad militari" - Caasimada Online
Home Warar Goodax Barre: “Farmaajo waxaa arrintan lagu saari karaa maxkamad militari”
Goodax Barre: “Farmaajo waxaa arrintan lagu saari karaa maxkamad militari”
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay xaalada cakiran ee ka taagan magaalada Muqdisho, kadib markii uu iska hor-imaad hubeysan uu dhex-maray ciidamada dowladda iyo kuwa Musharaxiinta.
Goodax Barre ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhacdadii xalay ay ciidamada dowladda ku weerareen Madaxweynayaashii hore ee dalka, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif oo ku sugnaa hotelka Hotelka Maa’ida (Ex.Nasahablod) ee u dhow Daljirka Dahsoon.
Waxa uu ku taliyay in laga fiirsado tallaabada aan la xakameyn karin natiijadeeda, isagoona sheegay in Farmaajo uu yahay madaxweyne xiligiisu uu dhamaday, islamarkaana ay tahay inuusan bixin amaro lagu howl-gelinayo ciidamada oo laga yaabo inay dad ku dhintaan.
“Waxaan aad uga xumahay wixii xalay dhacay. Waxaan ku talinayaa in laga fiirsado tallaabada aan la xakameyn karin natiijadeeda. Waxaan Farmaajo ku baraarujinayaa in uu yahay Madaxweyne xilligiisu dhamaaday, ayna tahay in uusan bixin amarro hawlgelin ciidan oo laga yaabo in dad ku dhintaan,” ayuu yiri Goodax Barre.
Waxa uu intaas kusii daray “Waxaa ku mutaysan kartaa (Farmaajo) in lugu saaro Maxkamad Military. Soomaaliya diyaar uma ahan dagaal sokeeye ee nabadda halaga wada shaqeeyo”.
Goodax ayaa ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan xiligan diyaar u aheyn inay gasho dagaal sokeeya, wuxuuna ku baaqay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabadda.
Hadalkan ayaa imanaya xili uu xalay dagaal agagaarka Daljirka Dahsoon oo u dagaal ku dhex-marayd ciidamada dowladda gaar ahaan kumaandooska Gorgor iyo kuwa ilaalada musharaxiinta mucaaradka, kadib markii ciidamada dowladda ay dhowr jiho ka weerareen Hotelka Maa’ida (Ex. Nasahablod) oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore.
Xaalada magaalada Muqdisho ayaa kacsan, kadib markii ay saaka ciidamada dowladda ay rasaas huwiyeen banaanbaxayaal ay hogaaminayeen qaar kamid ah Musharaxiinta Mucaaridka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, midaasi oo keentay iska hor-imaad labada dhinac ah.